tools တွေကိုဘာသာပြန်ချက်အလုပ်ကိုကှာခွား။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏မာတိကာဘာသာပြန်ချက်များဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ URL များကိုအခြားဘာသာစကားများဘာသာပြန်ချက်များမဟုတ်သည့်အင်္ဂလိပ်၌ရှိကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကား tool ကိုသည်ကမ္ဘာတွင်ကျယ်ပြန့်ဖြေရှင်းချက်ပေးသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏
URL များကိုအင်္ဂလိပ်၌ရှိကြ၏။ ဒါကြောင့် non-အင်္ဂလိပ်,
ကျေးလက်နေနှင့်ဒေသတွင်းကလူကို web sites များမဖွင့်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကား tool ကိုသူတို့အဘို့အကောင်းဆုံးတီထွင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ 1. ဒေသဆိုင်ရာဘာသာစကားအသုံးပြုသူများသည်တစ်ချိန်ကသာမည်သူမဆို၏အကူအညီဖွငျ့ဝက်ဘ်စာမျက်နှာလိမ့်မယ်။
2. ထို့နောက်မိမိတို့လက်ဖြင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tool ကိုအတူဝဘ်ဆိုဒ်များဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
ကို Ctrl + site ကိုရိုက်ထည့်ပါ ppooii 3. သူတို့ (ကီးဘုတ်ပေါ်မှာအတူတူနေသော, နှစ်ကြိမ်, လက်ျာ left မှမဆို3သော့, ။ ) စသည်တို့ကိုဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ် ooiiuu.com လိမ့်မယ်
လိပ်စာ bar မှာရိုက်ထည့်ပါလိမ့်မယ် 4. အစိုးရများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များပိုင်ရှင်တွေကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုဒ် paste ရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကား tools တွေကို websites များအတွက်အောက်ပါအတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘ်ဆိုဒ်နဲ့ upload အတွက် --body-- tag ထဲမှာ 1. Copy ကူးခြင်းနှင့်ငါးပိကုဒ်။
2. ကုဒ် paste လုပ်လိုက်ပါပြီးနောက်တစ်ကြိမ်အဘို့သင့်ကို browser အတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘ်ဆိုဒ်ကိုဖွင့်။
3. အခုတော့ web site ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်စတာတွေလိပ်စာဘားထဲမှာ ppooii.com သို့မဟုတ် (ooiiuu Ctrl + Enter) ရိုက်ထည့်ပါ။ ကီးဘုတ်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကား tool ကိုလူများအတွက်အောက်ပါအတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်။
1. Now ကိုကို web site ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်စတာတွေလိပ်စာဘားထဲမှာ ppooii.com သို့မဟုတ် (ooiiuu Ctrl + Enter) ရိုက်ထည့်ပါ။ ကီးဘုတ်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ
2. ကီးဘုတ်ပေါ်မှာအတူတူနေသောညာဘက် left မှမဆို3သော့, နှစ်ကြိမ်, ။